Crush ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းစရာတွေရှိတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ မော်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရတွေ
မေး။ ။ အသစ်ဝယ်ဖို့ရှိတဲ့ကားက?
ဖြေ။ ။ သင်ဇာ
ကားဆိုရင် အသစ်ပေါ်တိုင်းစီးချင်နေတာ။ လဲလည်း လဲချင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာကြတော့ ကားဈေးကွက်က အဲလောက်ကြီးဟိုဟာမဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ ကားဝယ်လို့ရှိရင် ရှုံးတာများတယ်လေ။ ဆိုတော့ ကားကတော့ သိပ်ပြီးတော့ ခုနောက်ပိုင်းထည်လဲတော့ မစီးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
မေး။ ။ သင်ဇာ လက်ရှိစီးနေတဲ့ကား?
အခု Ford လေးစီးနေတယ်ပေါ့။ Ford Everest ပေါ့ အဲဒါလေးစီးနေတယ်။
မေး။ ။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကားအမျိုးအစား?
4WD လေးတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ ပြိုင်ကားတွေဘာတွေသိပ်မကြိုက်ဘူး။ Luxury ပုံစံ မျိုးလေးတွေပိုကြိုက်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရ?
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် ၈ လပိုင်း ၈ ရက်နေ့ပေါ့နော် ကား accident ဖြစ်တာပေါ့။ အဲဒီတုန်းကဆို ဆေးရုံတောင်တက်လိုက်ရတယ်။ ဇတ်ကားတွေလည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ ရိုက်တာပျက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါလေးက အမှတ်တရပါပဲ ကားနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်။
မေး။ ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာရော?
အဲဒီတုန်းကကြတော့ သူငယ်ချင်းမောင်းတာပေါ့နော်။ မိုးတွေကလည်းရွာနေတာ အရှိန်ပြင်းတဲ့အခါဆိုတော့ ဓါတ်တိုင်ကို ဝင်တိုက်မိတာပေါ့၊ ဘီးချော်ပြီးတော့။ ဖြစ်တာတော့ သံလွင်လမ်းထဲမှာဖြစ်တာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆို ဒူးနှစ်ဖက်နာသွားတယ်။ လမ်းတောင် လျောက်လို့မရဘူး။ ပြီးတော့ လက်သန်းကျိုးသွားတယ်။ ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်ပေါ့။ ကားကို အရှိန်လေးနည်းနည်းပြင်းသွားပြီး ကီလိုလေး ၅၀ လောက်ဖြစ်သွားပြီဆို ကြောက်နေတာ အလိုလိုကြောက်နေတာ။ အဲဒီတုန်းကဆို accident ဖြစ်ဖြစ်ပြီးချင်း ကားမောင်းတာတောင် ဖြေးဖြေးလေးပဲ မောင်းပေးပါဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုး Psycho လေးတော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း အခုအေးဆေးပါပဲ။
မေး။ ။ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှု?
ကားက ရိုက်ထားတာတော့နည်းနည်းကြာပြီ။ ဒီထက်ကြာတဲ့ကားတွေလည်းရှိသေးတယ်။ ထွက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မထွက်တာထက်စာရင် ဒီလိုကားမျိုးလေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီကားလေးမှာလည်း အကုန်လုံးက ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်မို့လို့ Romance အချစ်ကားလေးကို ကောင်းကောင်းလေးကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီကားလေးကိုလာကြည့်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ( Crush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား)
မေး။ ။ Crush ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး …… ?
အဲဒီကားထဲမှာ ကာရိုက်တာက ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ အရမ်းအမိုက်စားပေါ့နော်။ သူဌေးသမီး အဲဒီလိုနည်းနည်းဆိုးတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးဆိုတော့ သင်ဇာကလည်း ကာရိုက်တာနဲ့လိုက်အောင်ဝတ်တာပေါ့နော် ဒါပေမဲ့လည်း တချို့အခန်းတွေ ဆင်ဆာဖြတ်ခံရတယ်ပေါ့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ကိုယ်က ကာရိုက်တာဝင်အောင်ဝတ်တာလေ။ မိန်းခလေးတစ်ယောက်က အခုခေတ်မှာလည်း ဒီလိုမျိုး ရင်အဟိုက်တွေ ဘောင်းဘီတိုတွေ ဝတ်နေကြပဲ။ ဇီးရိုး ကွာတားတို့ ဝမ်း ကွာတားဘောင်းဘီတို့ ဝတ်တယ်ဆိုတာ ဒါအထူးအစမ်းမဟုတ်တော့ဘူး။ အကုန်လုံးကလည်း နိုက်ကလပ် သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်သူမှ လုံလုံခြုံခြုံမသွားကြဘူး။ ဘယ်လိုပြောရမလည်း ဒီလိုမျိုး မပေါ့်တပေါ်လေးတွေ ဝတ်ပြီးပဲသွားကြတယ်ဆိုတော့လေ။ ကာရိုက်တာဝင်အောင် ဝတ်ထားတာ အဲဒီလိုမျိုးကလပ် သွားတဲ့အခန်းမှာ ဝတ်တဲ့ဟာက အဲဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်ဆိုပြီး ဆင်ဆာဖြတ်ခံရတယ်။